Wadahadaladii u socday Puntland & dawlada Somaliya oo u muuqda in heshiis laga gaaray. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 22, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 23 – Wadahadaladii todobaadkan uga socda huteelka Taar City madaxda dawlada Puntland iyo waftiga dawlada federaalka ah ee Somaliya ayaa u muuqda in heshiis laga gaaray badi qodobadii ay gorfeeyey 3-da guddi ee hore ay u magacaabeen labada dhinac.
Guddiga arrimaha siyaasada oo wadaxaajoodkoodu uu in door ah socday ayaa la isku mari waayey laba qodob oo la xiriira cilaaqaadka u dhexeeya labada dhinac, iyo go’aan ka gaarida arrimaha qaarkood.
Labada qodob ee ay labada dhinac ku kala aragtiyo duwanaayeen ayaa ahaa:
i) Dawlada federaalka ah oo dalbatay in heshiisyada caalamiga ah oo dhan ay gali karto oo keliya dawlada dhexe, halka Puntland ay dalbatay in inta laga hirgalinayo maamul-goboleedyada, lagana hirgalinayo nidaamka federaaliga ah gobollada dalka oo idil ay Puntland u madax banaan tahay heshiisyada noocaas ah,
ii) Puntland ayaa iyana dalbatay in ay xubno ku yeelato safarada ay madaxda dawlada federaalka ahi dalka dibadiisa ugu baxaan, iyo heshiisyada dawladu ay la gasho sharikaadka iyo dalalka shisheege.
Ilo xol ogaal ahi oo aan ka waraysanay wadaxaajoodyada labada dhinac ayaa sheegay in labada dhinac ay aad isugu dhaw yihiin, badina la soo gunaanaday wadahadalada, keliyana ay harsan tahay in qodobada lagu heshiiyey labada dhinac ay saxiisaan.
Waxaa todobaadkii la soo dhaafay ku sugnaa Puntland wafti uu hogaaminayo R/wasaare Sharmaarke oo ay weheliyaan 23 mudane oo ka kala tirsan labada gole ee dawlada Somaliya.
Dhinaca Puntland waxaa wadaxaajoodyada ka qayb galay M/weyne Faroole, ku xigeenkiisa Gen. Shire, Afhayeenka baarlamaanka Xirsi, iyo mudanayaal ka tirsan labdada gole ee dawlada Puntland.
Waa wadahadaladii ugu horeeyey ee labada dhinac ay yeeshaan, walow ay jireen kulamo hore u dhex maray.
Waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda labada dhinac ay soo saari doonaan xog warran tafaasiil ka bixinaya heshiisyada ay gaareen.
Wadahadalada madaxda Puntland iyo waftiga R/wasaare Sharmaarke ayaa nuxurkoodu yahay iskaashi iyo wadashaqayn dhex marta labada dhinac.
Qanyare oo sharci daro ku tilmaamay wadahadalada u socda Puntland & dawalada Somaliya. [Dhegaysi …]